PDP na-aza Ayade maka ‘iweghara ọchịchị’ nke PDP
PDP na-aza Ayade 'n'ike n'ike' nke odeakwụkwọ PDP
Politics Nwere ike 22, 2021
Kọmiti na -ahụ maka nchekwa na Cross River Peoples Democratic Party (PDP) azaghachila ihe ọ kpọrọ mmebi iwu na ike weghara odeakwụkwọ ya n'aka gọvanọ steeti ahụ, Ben Ayade.
Gọvanọ Ayade hapụrụ PDP gaa All Progressive Congress (APC) na Tọzdee, dị ka Vanguard si kwuo. Na mmụba na-esote, Vanguard kwupụtara na ụlọ ahụ dị na 142 (a) n'akụkụ Muritala Mohammed Highway na Calabar, nke nọ na PDP Secretariat na Cross River, na-ese na All Progressive Congress, APC, agba na ụtụtụ Satọde.
Dịka akwụkwọ mgbasa ozi nke Effiok Cobham bịanyere aka na ya, Onye isi oche nke Kọmitii Na-elekọta Ndị Nlekọta PDP na Cross River State,
“N’ututu a, ndị uwe ojii ji egbe gbachibidoro ndị ode akwụkwọ nzuzo PDP nke steeti Cross River dị na 42 Murtala Mohamed Highway, Calabar, na-enye ndị omekome si n’aka otu APC nke Gọvanọ Ben Ayade ịbịakwute ụlọ ọrụ nzuzo nke steeti PDP na ebumnuche ịtụgharị ihe onwunwe ahụ gaa APC. ochichi obodo.
“Ka ọ dị ugbu a, akụnụba ndị PDP, ọkachasị akwụkwọ na akwụkwọ ndekọ jọgburu n’ime afọ iri abụọ gara aga, emebila, tufuo, ma ọ bụ nọrọ n’aka Gọvanọ Ben Ayade.
”Ndị omekome APC na ndị uwe ojii Naịjirịa amachiela ndị otu Kọmịlị Na-ahụ Maka Nlekọta Ọchịchị nke steeti PDP ịbata n’ala ahụ. A na-achọ ụlọ ahụ ugbu a na agba ndị APC.
“N’ihi nke a, anyị na-agbasi ike ike megide mwakpo ọjọọ APC mere na PDP odeakwụkwọ na iwu nke Gọvanọ Ben Ayade. Ihe a bụ PDP ugbu a.
”Anyị nwere nkwekọrịta mgbazinye na nnata na-egosi ịkwụ ụgwọ ụlọ maka oge ugbu a nke ala ahụ.
”Onye nwe ụlọ ahụ kọwara na mbinyeaka nke PDP na 42A Murtala Mohamed Highway ka dị. Onye Ọkammụta kwara ụta maka ọrụ APC n’oge gboo, sị:
“Aghọtara m na a na-ese ihe onwunwe na agba APC ugbu a, m na-akpọkwa ka m gwa gị na enweghị m ndokwa na APC. Ana m ekwuputa na ulo obibi PDP ka na-arụ ọrụ nakwa na ha bụ ezigbo ụlọ m ma bụrụ onye amatara.
“Mwakpo a bụ mpụ mpụ, mmebi akụ ihe ọjọọ, na omume ndị nwere ike ibute ọgbaghara nke ọha na eze.”
“O juru anyị anya na ọ bụ Gọvanọ Ayade, onye nwere ọrụ iwu dị ka onye isi ọrụ nchekwa nke steeti iji kwado iwu na iwu, na-agba ụdị ụdị aghụghọ a obi ọjọọ.
“Anyị nwere olile anya na mgbe onye nọ n’okporo ụzọ na-eitomi omume a ma banye n’ụlọ ọ bụla ma ọ bụ ihe onwunwe ọ bụla nke na-adọrọ ya anya, gụnyere ụlọ ọrụ Gọvanọ Ayade nwetara ọhụrụ na steeti Cross River, a ga-atụgharị nke a dị ka egwuregwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ziri ezi.
”Omume APC eruola ọkwa ọhụrụ na ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa. Nke a bụ omume na-akpasu iwe ma na-ebute ire ere. PDP nyere Gọvanọ Ayade ikike nke ụmụ amaala steeti Cross River ugboro abụọ: otu ugboro ka ọ bụrụ onye sinetọ na otu mgbe dịka gọvanọ. Agbanyeghị na anyị ji Gọvanọ kpọrọ ihe AyadeNhọrọ nke ndọrọndọrọ ọchịchị, anyị na-ekwusi ike na o nweghị ikike igbochi omume udo nke ndị na-erube isi na steeti Cross River, gụnyere iguzobe otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụla.
“Ya mere, anyị na-akpọ ndị isi APC na steeti Cross River, yana ndị isi ala nke APC, ka ha jụ omume na-adịghị mma nke Gọvanọ Ayade ma kwe ka PDP nọrọ n’udo ma jiri ala ya.
“Anyị na-achọ ka eweghachite ndekọ niile, ihe onwunwe, na akụrụngwa nke APC weghaara n’aka ndị odeakwụkwọ PDP.
”Anyị chere na Onyeisiala Muhammadu Buhari kwesịrị ịrịọ Gọvanọ Ayade ka ọ kwanyere iwu na iwu ugwu ma zere omume ga-eme ka ọnọdụ nchekwa obodo ka njọ.
"N'ikpeazụ, anyị kwubiri na Gọvanọ Ayade na-agafe ohere site n'ịghara ị nweta ụlọ ọhụrụ maka ndị otu APC ya na steeti.
“Ime nke a ga-enye ya ikike ịrụzu opekata mpe otu ọrụ na steeti Cross River n’oge ọ bụ onyeisiala.”
Eedris zara Keyamo si N3m kwuru na JagaJaga Reloaded. April 25, 2021
N'ikpeazụ, Wizkid zaghachiri na mmachibido iwu Twitter site n'ịkpọtụ Naịjirịa UAR June 5, 2021
Zechọgharị egbugbu: Otu nwaada gosipụtara ịhụnanya ya n'ebe Gọvanọ Ayade nọ site n'itinye ya aka n'azụ ya April 22, 2021